VaMugabe Vanodzoka kuSingapore Vachizviti Vakasimba
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vange vachinzi nemamwe mapepanhau vari kurwara zvakaipisisa kuSingapore, vadzoka muHarare neChina mangwanani. VaMugabe vanoti vainge vaenda kuzororo reEaster kuSingapore.
Vatori venhau vekunze nemunyika vange vari panhandare yendege yeHarare International vachimirira kusvika kwavo.
Asi VaMugabe havana kutaura nevatori venhau pavasvika. Izvi zvaitwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, avo vataura nevatori venhau panhandare yendege. VaShamu vati VaMugabe vakasimba kunge njanji chaiyo.
VaShamu vaenderera mberi vachiti vanhu vari kuti VaMugabe vari kurwara vanoda kuti nyika iite zinyekenyeke uye kupidigura hurumende.
VaMugabe vaita neChina musangano wedare remakurukota iro range risina kusangana kwemasvondo maviri sezvo vange vasipo, uye vasingadi kuti riitwe kana vasipo.
Vakapinda mudare remakurukota vanoti VaMugabe vange vakasimba uye vange vachitoita nyambo nemashoko ekuti vainge vorwara zvakaipisisa vachiti ivo vatove chifandichimuka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro kuOxford University, VaPhillip Pasirayi, vanoti mashoko aVaShamu ekuti VaMugabe vakasimba haasi echokwadi.
VaMugabe vakatarisana nematambudziko makukutu muhurumende yemubatanidzwa.
Vasati vasimuka kuenda kuSingapore vakasiya vaudza vanotungamira Zanu-PF munhaurirano uye muManagement Committee yeCOPAC, gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, uye gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu, VaNicholas Goche, kuti vapedze zvinhu zvasaririra kuti bumbiro remitemo ripere kuitira kuti paitwe sarudzo.
Asi zvinonzi izvi zvakona n’anga murapwa achida sezvo veZanu-PF vasiri kuwirirana nevemapato maviri eMDC.
Mutauriri we Zanu-PF, VaRugare Gumbo, vaudza Studio 7 kuti vange vakamirira VaMugabe uye vachatura nezvenyaya iyi mudare repamusoro rebato ravo svondo rinouya.
Mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vanoti ichokwadi kuti hapana kuwirirana panyaya yekupedzisa zviri kunetsa munkunyorwa kwebumbiro idzva.